Ny vovony Testosteron Raw (58-22-0) Mpanao & Mpanamboatra - Orinasa
3.00 avy amin'ny 5 miankina amin'ny 2 mpanjifa naoty
Testosterone Pulver (CAS 58-22-0) dia hormonina izay manara-maso ny dingana maromaro ao amin'ny vatana. Ao amin'ny lahy, ny testosterone Powder dia voafehy amin'ny fitsapana raha eo amin'ny vehivavy dia esorina amin'ny trondro sy ny overs ny adrenal, ary ny sasany dia avy amin'ny fiovan'ny peripheral ny hormone hafa, androstenedione.
Ny ankamaroan'ny testosterone dia tsy misy azo atao ao amin'ny rà mandriaka, fa alefa any amin'ny albumin na ho an'ny hormone binding globulin (SHBG). Ny testosterone tsy voafatotra sy izay mifamatotra amin'ny albumin dia lazaina fa mavitrika sy bio-disponib, raha ny testosterone mifandray amin'ny SHBG dia tsy misy ary tsy afaka manatanteraka ny asany.
Rano Testosterone volo (58-22-0) video
Rano Testosteron volo (58-22-0) Description
Rongony Testosterone volo ampiasaina amin'ny fitondran'ny lehilahy hoggonadia sy karazana homamiadana sasany. Tsy fantatra hoe raha mahasoa na mampidi-doza ny fampiasana ny vatana Testosterone ho an'ny kely ambany noho ny fahanterana. Ny Testosterone dia azo ampiasaina ho toy ny gasy na paty izay ampiharina amin'ny hoditra, mitsoka ao anaty hozatra, takelaka izay napetraka ao amin'ny takolaka, na takelaka izay nalaina am-bava.
Ny tsiranoka testosterone roah dia ampiasaina ho endri-doping amin'ny atleta mba hanatsarana ny fahaiza-manao.
Anabolic-androgenic steroids (AAS), anisan'izany ny vovo-dronono Testosteron sy ny esters, dia noraisina ihany koa mba hanatsarana ny fampandrosoana, ny hery, na ny fiaretana. Manao izany mivantana izy ireo amin'ny fampitomboana ny fivelaran'ny proteinina amin'ny hozatry ny hozatra. Vokatr'izany dia mihamitombo kokoa ny haofotsy ary mihamafana haingana kokoa noho ny an'ny olona.
Rojo testosteron roja (58-22-0) Specifications
Product Name Rano Testosteron volo
Anarana simika Axiron, Androgel, Fortesta, Testopel, Striant, Testim, Delatestryl, Androderm, antsoina ihany koa amin'ny Test, na Test Base, testosterone no ester.
Brand Name Andriol, Androderm, AndroGel, Axiron, Delatestryl, Depo-Testosterone vovoka, Intrinsa, Nebido, Omnadren, Primoteston, Sustanon, Testim, TestoGel, TestoPatch, Testoviron, ary Tostran
Drug Class Androgen, anabolic steroide, anabolic agent
mitsonika Point 153-157 ° C
Bika Aman 'endrika Volo fotsy na fotsy mavo na fotsy mavo
Solubility Ao anaty rano, 23.4 mg / L amin'ny 25 deg C
fampiharana Hormonina steroid, fanafody, gel, patch, bodybuilding
Inona no atao hoe volo testosteron Raw (58-22-0)?
Ny vata fampangatsiahana testosterone dia ny hormone lahy miaina ao amin'ny testicles. Ny hormone ho an'ny testosterone dia manan-danja amin'ny fampandrosoana ny lahy sy ny vavy amin'ny lahy sy ny vavy.
Mandritra ny fahamaotiana (amin'ny taonan'ny zatovo), ny testosterone dia manampy ireo tovolahy hanatsara ny toetran'ny lahy sy ny volo, ny feo lalina, ary ny hery misintona. Mila mila testosterone ny lehilahy mba hahazoana sperm. Mihena ny herin'ny testosterone amin'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny, noho izany ny zokiolona dia mihena ny halatra testosterone ambany.
Ahoana ny vovoantom-bolo testosteron (58-22-0) asa
Ny testosterone poeta dia androgen izay voalaza fa fitsaboana fitsaboana in Ny lahy ao anatin'ny toe-javatra mifandraika amin'ny soritr'aretin'ny testosterone ambany ao amin'ny vatana na ny tsy fisian'ny testosterone endogenous. Ny hormone ara-pananan'ny vokatra izay mamporisika ny fampandrosoana ny toetra maha-lahy ny lahy. Ny halebeazan'ny hormone dia mahasoa ny fahasalaman'ny lehilahy. Ny salam-pahasalaman'ny hormone dia mampiroborobo ny fahasalamana ara-pahasalamana amin'ny fihenam-bava ny loza ateraky ny fiakaran'ny tosi-drà sy ny aretim-po, ankoatra ny fihinanana sakafo salama. Na izany aza, ny testosterone dia azo omena fitsaboana ho an'ny fitsaboana manokana sy ny taham-pahaizana ambany ambany amin'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ny hogogonadisma ao amin'ny Kilonga (fialam-boly na naoty) - tsy fahombiazan'ny toekarena noho ny cryptorchidism, bilateraltorsion, orchitis, sy ny aretina testis sy ny aretina; na orkidectomy.
Hypogonadotropic hypogonadism (fiterena na azo) - gonadotropin na tsy fahampian'ny LHRH, na aretina fihinan'ny aretina azo avy amin'ny tumors, trauma, na taratra.
Ny fiarovana sy ny vokatra azo avy amin'ny DEPO-Testosterone (testosterone cypionate) amin'ny lehilahy miaraka amin'ny "hypogonadism taona mifandimby" (antsoina hoe "hogogonadisma efa hatry ny ela") dia mbola tsy nisy.
Ny poezia testosterone dia misy eo ambanin'ny anarana marika hafa: Aveed, Depo-Testosterone, Delatestryl, ary Testopel.
Rojo Testosterone volo (58-22-0) Dosage
Ny dosage lahy amin'ny bodybuilder ao amin'ity steroid ity dia matetika amin'ny 400-1200mg isan-kerinandro ary ny faharetan'ny herinandro dia avy amin'ny herinandro 8-20, miankina amin'ny tanjona amin'ny atleta. Ny vehivavy matetika dia mahita vokatra tsara amin'ny doses amin'ny 50-100mgs isan-kerinandro.
Mampiasa poofa testosterone roah (58-22-0)
Testosterone Powder no tena voajanahary ny lahy hormonina ao amin'ny biby mampinono ary biby miafina steroid amin'ny atoma XBXX. Io no hormone lahy malaza amin'ny taovam-pandevonan-tsakafo, ary io no homamiadan'ny lahy sy vavy indrindra. Mampirisika ny olona hanao firaisana amin'ny olona sy ny biby izy io ary ny fampandrosoana ny fizahan-tany faharoa, ny fanasitranana spermia, ary ny fiovan'ny proteinina amin'ny fanamafisana ny hozatra. Testosterone Powder dia manara-maso ny fivoarana sy ny fampandrosoana ny taovan'ny lahy sy ny vavy ary ny toetra maha lahy na lahy na vavy. Ny ankamaroany dia ampiasaina amin'ny fitsaboana fanoloana ny eulichisma, ny fitsaboana ny lahy sy ny vavy, ary ny fitsaboana ny tsy fahampian-tsakafo, ary ampiasaina amin'ny fikarakarana biochemika.
Mividy testosterone vovoka avy amin'ny Buyaas.com